Voatsoka Tao Amin’ny Sina Weibo Ilay Shinoa Mpanoratra Bilaogibitika Malaza · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Mey 2013 14:51 GMT
Nofafana tsy ho eo amin'ny tranonkala ny kaonty Sina Weibo an'i Murong Xuecun, iray amin'ny mpanoratra ao Shina anisan'ny malaza indrindra ao amin'ny firenena eo amin'ny fitsikerana ny fanaovana sivana, ka izany famafana izany dia ahiana ho ezaky ny governemanta hanenjika ny siosion-dresaka an-tserasera amin'ny fanaovana ho lasibatra ireo mpiserasera manana ny lazany.
Nesorina tsy ho ao amin'ny rohin'ny (twitter) ny kaontin'i Murong izay manana mpanaraka mihoatra ny 1,1 tapitrisa, tamin'ny 11 mey 2013. Miresaka momba ny olana ara-tsosialy any Shina amin'izao fotoana tahaka ny kolikoly sy ny fanaovana sivana ny media ny lahatsoratra sy ny adi-hevitra ataony amin'ny bolongana bitika.
Maro ireo manombatombana fa ity famonoana kaonty ity dia misy ifandraisana amin'ny tetipanoron'ny governemanta vao haingana hanery lalana ireo kaonty Voamarina sy manana mpanaraka an-tapitrisany ao amin'ilay vohikala-pamahanam-bolongana bitika, tetipanorona fantatra amin'ny anarana hoe “V Be”. Ny antony anenjehana ireo mpisera ireo dia ny faniriana ny hamelezana ny tsaho an-tserasera, araka ny nambaran'ny Sampan-draharaham-panjakana Misahana ny Fampitam-baovaon'ny aterineto tamin'ny 2 Mey 2013, noho ny fihetsiketsehana farany [mg] teo tany Beijing.
Niteraka fanafintohinana teo amin'ny mpanaraka an'i Murong izany fihetsika izany. Maro ireo nanova ny anaran'ny kaontiny ho “Taranaka faharoan'i Murong Xuecun” na “Taranaka fahatelon'i Murong Xuecun” ho fanehoa-panohanana. Nisy vondrona mpankasitraka an'i Murong Xuecun nisongadina ny andron'ny namafàna ny kaontiny ihany, izay nanolotra ny vaovao farany momba an'i Murong. Hoy ilay vondrona mpankasitraka nanoratra [zh]:
Miresaka momba ny fanapenam-bava efa niainany tany Dalian tamin'ny Jolay 2012 tsy misy ifandraisany tamin'ity tao amin'ny Shina Weibo i Murong Xuecun . (Pikantsary avy amin'ny youku)
Tampeno ny Murong Xuecun iray, dia hisy “Murong Xuecun” an'arivony hipoitra. Izany no tanjaky ny Fahafahana. Ny kaonty vaovaon'i Murong dia “Pingyuan Dongfangshuo”.
Nizara ny hafatra taloha efa nalefan'i Murong tamin'ny mpiseran'i Weibo ao amin'ny freeWeibo ny lehiben'ny Google Shina telo aloha Kai-Fu Lee. Ny freeWeibo dia bilaogy iray mitsikaraka mitady ireo votoaty voasivana ao amin'ny Sina Weibo:
Ao ivelan'ny tamboho ny (vatana mangatsiakany).
Wang Yiqing, mpanao gazety iray avy ao amin'ny Hainan Isan'andro, nanome vaovao farany [zh] ny satan'i Murong ao amin'ny Weibo:
刚刚和@慕容雪村 通了个电 话，他声调一如既往平稳，说他在三大门户网站开的微博都被永久封号。好在没有人身危险，也没有放弃抗争。
Vao tafaresaka tam-pinday tamin'i @Murong Xuecun aho. Milamina toy ny mahazatra ny filantom-peony. Nilaza izy fa tena voasakana tokoa ny kaontiny telo ao amin'ny tranonkalam-pamahanam-bolongana bitika telo lehibe nisy azy. Mba tsy voakitikitika aloha izy, tsy mitsahatra ny manohitra izy.
Murong tenany dia mampiasa kaonty Weibo hafa “Pingyuan Dongfangshuo” tsy misy “V” milaza hoe Voamarina hanehoany fankasitrahana ireo mpanaraka azy:
Mitsikera matetika ny fahazaran-dratsy sy ny mbola mamohehatra aho, saingy mbola maha-te-ho-tia hatrany ity tany ity sy ny mponina ao aminy. Tsy mbola nanam-potoana hanaovan-javatra ho azy ireo aho dia efa nijoro hiaro ahy ry zareo. Ankasitrahana ireo efa naneho fanohanana, mankatelina anareo amin'ny fahasahiana raisinareo ho ahy sy ny ompa iaretanareo noho ny amiko, tsy maninona na V kely ianareo na V be. Ho an'ireo manesoeso ahy, tsy manana antony hitazona lolompò aminareo aho. Ho an'ireo izay namelatra ny tanany hanampy ahy, horaiketiko ao am-poko ianareo.
Ny mpisera Weibo “Qiji Jianshen Yuqian” nanoratra [zh] fa fahavoazam-be ho an'ny habaka ny famafana ny kaontin'i Murong:
Taitra aho androany raha nahita fa nofafana ny kaontin'i Murong Xuecun. Efa namaky ny ankamaroan'ny bokiny aho ary tsy niala tamin'ny bilaoginy bitika mihitsy. Tsy maro ny mpanoratra sady mahatsapa tena no milamina eto amin'ity firenena ity, eny fa na dia amin'ireo manana fahalalana momba ny lalàna aza ka mivonona ny hampihatra azy. Veloma, Murong, handao ny famahanam-bolongana bitika ao anatin'ny fotoana maharitra aho, satria tsy mbola niposahan'ny mazava ity tontolo ity. Adinoy aho rahalina azafady.
Nilaza ny heviny [zh] eo amin'ny fiantraikany goavana amin'ny fanapenam-bava an'i Murong ity ny mpikaroka mpanampy tao amin'ny New York Times taloha Bao Beibei :
Nanoratra i Pulitzer fa raha ampitoviana amin'ny sambo ny firenena, ny mpanangom-baovao dia ireo mpijery lavitra izay mampitandrina eo noho eo ny zavatra hitany mialoha ny isian'ny zava-tsy ampoizina. Tsy ny mpanangom-baovao ihany, mieritreritra aho fa azo ampidirina ao amin'ity sokajy ity ireo mpanoratra sy mpilaza hevitra eo amin'ny resaka sosialy. Tsy hampihena ny herijika mety hidonan'ny sambo amin'ny sakana mpamaky sambo tsy akory ny fanesorana mpitazan-davitra iray, fa mety hampihena ny andrimaso sy ny fahafaha-misoroka ireo sakana mpamaky sambo ho an'ireo anaty sambo. Ho an'i @Murong Xuecun
“LiWu-Mingri Hulianwang” naneho [zh] ny fahadisoam-panantenany amin'ny bilaogy bitika tsy hahitana an'i Murong:
“Novonoina” i @Murongxuecun, izay midika hoe nohosihosena ny bilaogera manana faharanita-tsaina. Nihena be dia be ny lanjan'ny bilaogy bitika eo anatrehako. Ny nantenaina tamin'ny bilaogy bitika ho fomba hampiroboroboana ny sosialy no nohalefahana.